कसले पुर्‍यायो ज्ञानेन्द्रका मान्छेलाई विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा ? - Lokpath Lokpath
२०७६, ८ माघ बुधबार ०८:१२
प्रकाशित मिति : २०७६, ८ माघ बुधबार ०८:१२
स्रोतका अनुसार डीआईजी पोखरेलले कालिदासको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न समन्वय गरेका थिए ।
दुई श्रीमती विवाह गरेका र बारम्बार अनेकन विवादमा तानिएका कालिदास गणतन्त्र स्थापनापछिका केही वर्ष गुमनाम थिए । जनआन्दोलनअघिसम्म उनी दरबारनिकट थिए । उनी आफूलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निकट बताउँछन् । राजतन्त्र फेरि फर्कन सक्ने बताउँदै उनले पछिल्लो समय बेलाबखत विभिन्न युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिएको देखिन्छ । ओखलढुंगा घर भएका कालिदास शाहीकालमा हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने भन्दै यज्ञ र होम लगाउँदै हिँड्थे । २०६६ सालमा उनले हिन्दु धर्मका विभिन्न खेमाका धर्मभीरुलाई जम्मा पारेर पशुपतिको वनकालीमा सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञ गरेका थिए ।कान्तिपुरमा खबर छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले मोबाइलबाटै आफूले कमाएको रकम आफन्तलाई पठाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा
बैैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याज अकस्मात घटाउँदा बचतकर्ता मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय कर्जाको
के श्रेष्ठ र गौतम मन्त्री बन्न पाउलान् ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता
काठमाडौं । लामो समयको लकडाउन खुलेसँगै पुनः राजस्व छली गर्नेहरू सक्रिय हुन थालेका